Ethnic Nationalities Voice တိုင်းရင်းသားအသံ: October 2011
လက်ရှိဗမာပြည်နိုင်ငံရေးအခြေအနေဟာပြောင်းလဲနေတာမဟုတ်ဘဲဗြောင်ကြီးလဲနေကြတာပင်ဖြစ်သည်၊အန်းအေလ်ဒီပါတီအနေနဲ.ရွေးကောက်ပွဲဝင်မည်ဆိုရင်မဲလိမ်မဲခိုးမှတက်လာသည့်ပုံစံအသစ်စစ်အစိုးရကိုအလိုအလျှောက်အသိအမှတ်ပြုရာရောက်ပြီး ၁၉၉၀ ခုနှစ်တွင်မိမိအနိုင်ရရှိခဲ့သည့်ရွေးကောက်ပွဲကိုမိမိကိုယ်တိုင်ဖျက်သိမ်းသည့်သဘောသက်ရောက်သည်၊စစ်အစိုးရအဆက်ဆက်၏သမိုင်းဆိုးများကိုသမိုင်းကောင်းဖြစ်အောင်ဖန်တီးနေသည့်သဘောလဲဖြစ်တယ်၊မိမိတို.သမိုင်းကောင်းများကိုသမိုင်းဆိုးဖြစ်အောင်မိမိတို.ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးနေခြင်းပင်ဖြစ်သည်၊မိမိကိုယ်ကိုသတ်သေသွားသည့်သဘောနဲ.သူရဲကောင်းများ၏တန်ဘိုးကိုလျော့ချလိုက်သည့်သဘောဖြစ်နေမှာကိုလည်းစဉ်းစားစရာပဲ၊ဒါကြောင့်၊အောက်ပါအတိုင်းအကြံပေးချင်ပါသည်၊
BURMA: Burmese Army Uses CHEMICAL WEAPONS AGAINST KACHIN INDEPENDENT ARMY.ကေအိုင်အေကိုတိုက်ခိုက်ရာတွင်ဗမာစစ်တပ်ကဓါတုလက်နက်အသုံးပြုနေ
BURMA: Burmese Army Uses CHEMICAL WEAPONS AGAINST KACHIN INDEPENDENT ARMY
News Source: http://jinghpawkasa.blogspot.com/
News Source: http://www.kachinnews.com/news/2122-burmese-army-resorts-to-chemical-weapons-warfare-against-kachin-rebels.html
ကမ္ဘာကြီးပျက်ခါနီးပီဟုနိမိတ်ဖတ်ခဲ့သည့်ဖရစုမ်းချိုင်းစကားမှန်ကန်ပြီလော၊ End of the World?
ကမ္ဘာကြီးဘာကြောင့်ပျက်စီးခါနီးလဲဆိုတာကိုအောက်ပါအတိုင်းနိမိတ်ဖတ်ခဲ့သည်၊In his preachings last month, Phra Somchai said that the world had breached Buddhist teachings and in March all continents would collapse and be wiped out by giant waves.ကမ္ဘာကြီးကဗုဒ္ဓရဲ.အဆုံးအမတရားတော်များကိုချိုးဖောက်ပျက်စီးခဲ့သည့်အတွက်ကြောင့်တိုက်ကြီးများကရေလှိုင်းကြီးများဖြင့်ဖြိုလဲပျက်စီးလိမ္မည်.လို.မိန်.ကြားတော်မူခဲ့သည်၊ဘယ်နေရာမှာပျက်စီးမလဲဆိုတာကိုလည်းသူကဆက်လက်မိန်.ကြားခဲ့သည်၊ He warned that Vietnam would be completely destroyed while small areas of Burma would remain intact. Bangkok would disappear but much of the Northeast would be spared the catastrophe due to its large concentration of Buddhist sites.ဗီယက်နမ်နိုင်ငံကလုံးဝပျက်စီးလိမ္မည်၊ဗမာပြည်ကနေရာအနည်းငယ်ထိခိုက်မှုရှိနိုင်ပြီးထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို.ကြီးကပျောက်ကွယ်သွားလိမ္မည်၊ထိုင်းနိုင်ငံအရှေ.မြောက်ဒေသကတော့ဗုဒ္ဓအဆောက်အအုံးတွေများတာကြောင့်ပျက်စီးမှုမရှိနိုင်ဟုမိန်.ကြားခဲ့သည်၊
သတင်း VIEWS, သတင်း။ News
ကချင်ပြည်နယ် ဗန်းမော်မြို့တွင် ဗမာစစ်တပ်မှ တစ်ရပ်ကွက်လျင် အထမ်းသမား (ပေါ်တာ) အယောက် (၂၀) စီပေးရန် ရပ်ကွက်လူကြီးများကိုပြောဆိုလာကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။ ယခုအခါ ဗန်းမော်မြို့ပေါ်တွင် ပြည်သူလူထု အိမ်ပြင်မထွက်ရဲကြသောကြောင့် တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်လျက်ရှိကြောင်း မြို့ခံပြည်သူများမှ သတင်းပေးပို့လာပါသည်။
ကချင်ပြည်နယ် မြစ်ကြီးနား ဗန်းမော် လမ်းပေါ် နမ့်ဆန်ယန်ရွာနှင့် ဂန်ဒေါင်ယန်ရွားကြား အင်ပေါန်ရွာတွင် မနေ့က အောက်တိုဘာ (၂၂) တွင် ဗမာစစ်တပ်မှ အမြောက်ကျည်ဆံ အထည့်မှားသောကြောင့် အမြောက်ပေါက်ကွဲ သွားပြီး ဗမာစစ်သား အမြားအပြားသေဆုံးသွားကြောင်း သတင်ရရှိပါသည်။
REPORT: "Discrimination, Conflict, and Corruption in the Ethnic States of Burma”-ENC
သတင်း Record, သတင်း။ News
Documented Photos of the Fascist Burmese Army LIB No.121 Destroyed Nam Sam Yang Village in Kachin State Between October 16-20, 2011
မြန်မာစစ်သားများကို နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ပို့ ၊ ကချင်ဒေသ စစ်ဆင်ရေးအတွင်း ရဟတ်ယာဉ်များအသုံးပြုမှုရှိလာ
by Jade Land on Saturday, October 22, 2011 at 12:26am
မြန်မာအစိုးရ စစ်တပ်မှ စစ်သားအများအပြားကို တရုပ်နိုင်ငံမှတဆင့်ဖြတ်ကျော်ကာ ကချင်-တရုပ် နယ်စပ်ဒေသသို့ ပို့ ဆောင်နေကြောင်းသိရှိရသည်။ အောက်တိုဘာ(၂၁)ရက် မနက်ပိုင်းက တရုပ်နိုင်ငံ နယ်စပ်မြို့ ရွှေလီ မှ တရုပ်စစ်ကား အစီး (၃၀)ခန့် သည် နယ်စပ်ဒေသဖြစ်သော လွယ်ဂျယ်ဒေသ(Loi Je) ၊ ဂျန်ခေါင်ဒေသ ( Jang Hkong) ဘက်သို့ မောင်းနှင်ထွက်ခွာသွားကြကြောင်း သိရှိရသည်။ အဆိုပါ တရုပ်စစ်ကား အစီး(၃၀)ထဲတွင် ရှေ့ဆုံးမှသွားနေသော စစ်ကား(၂)စီး (၃)စီးခန့် တွင်သာ တရုပ်စစ်သားများတွေ့ ရပြီး ကျန်စစ်ကားအားလုံးတွင် မြန်မာစစ်သားများသာ တင်ဆောင်သွားကြောင်းမျက်မြင်တွေ့ ရှိသော ဒေသခံများမှ အသိပေးပြောကြားလာပါသည်။
ဒေသခံများမှ ခန့် မှန်းပြောကြားချက်အရ လွန်ခဲ့သော ရက်များအတွင်း ကေအိုင်အေ မှသိမ်းပိုက်ကာ ထိန်းချုပ်လိုက်သော လွယ်ဂျယ်ဒေသ အပါအ၀င် ဂျန်မိုင်စခန်း ( Jan Mai post) နှင့် မော်ရှီ (Maw Shwi Post) တို့ ကို ပြန်လည်သိမ်းပိုက်ရန်ရည်ရွယ်ပုံရကြောင်း သိရှိရသည်။ယင်းကဲ့သို့ စစ်အင်အားဖြည့်တင်းနေခြင်းကြောင့် လွယ်ဂျယ်ဒေသခံများမှာ တိုက်ပွဲ ကြီးကြီးမားမား ပြန်လည်ဖြစ်ပွားလာမည်ကို စိုးရိမ်ထိတ်လန့် နေကြကြောင်းလည်း ထပ်မံသိရှိသည်.။
အဆိုပါ နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ကာ မြန်မာစစ်သားများ ပို့ ဆောင်သည့် သတင်းမှန်ကန်ကြောင်း လိုင်ဇာဌာန မှလည်း အတည်ပြုပြောကြားလာပါသည်..။
ကေအိုင်အေ ထိန်းချုပ်နယ်မြေဖြစ်သော ရှဒန်ပါ ( Shadang Pa ) မဒီးယန် ( Madi Yang ) ဒေသဘက်တွင် အောက်တိုဘာ(၂၁)ရက် မနေ့ က မြန်မာ အစိုးရ စစ်ဘက် ရဟတ်ယာဉ် များ ရောက်ရှိ ဆင်းသက်မှုများရှိနေကြောင်း သိရှိရသည် ။ ယနေ့ အောက်တိုဘာ(၂၂)ရက်နေ့ တွင်လည်း ဗန်းမော်မြို့ အနီးပါတ်ဝန်းကျင် ဘက်တွင် စစ်ဘက်သုံး ရဟတ်ယာဉ်များ ပျံသန်း လှုပ်ရှားမှု ထူးထူးခြားခြား များပြားနေကြောင်းလည်း ထပ်မံသိရှိရသည်။ ယခုရက်ပိုင်းအတွင်း ကေအိုင်အေ ဌာနချုပ်လိုင်ဇာကို တက်ရောက်ထိုးစစ်ဆင်နိုင်ဖွယ်ရှိကြောင်း ထပ်မံသိရှိရသည်။
ကချင်ပြည်နယ်တွင်စက်တင်ဘာလ (၁၃)ရက်နေ.မှယနေ.ထိဖြစ်ပွားခဲ့သောစစ်ပွဲများဗမာစစ်သား (၇၀၀)ကျော်ကျဆုံး
ကချင်ပြည်နယ် ကေအိုင်အေ အစိုးရနှင့် ဗမာအစိုးရ စစ်တပ်တို့ကြား စက်တင်ဘာ (၁၃) ရက်မှ ယနေ့ထိဖြစ်ပွားခဲ့သော စစ်ပွဲများတွင် ကေအိုင်အေ ဗဟိုဌာန၏စာရင်းအရ ဗမာစစ်သား (၇၀၀) ကျော်ကျဆုံးသွားပြီဖြစ်ကြောင်း နှင့် စာရင်းမ၀င်ကျဆုံးသူများနှင့်ဆိုလျှင် (၁၀၀၀) ကျော်ကျဆုံးပြီဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။ ဤသို့ ဗမာစစ်တပ်မှ စစ်သားများ အများအပြားကျဆုံး ရခြင်းမှာ ဗမာစစ်တပ်ဘက်မှ စစ်သားများ စစ်တိုက်ချင်စိတ်ကုန်ဆုံးသွားမှုနှင့် အသက်မပြည့်သေးသော ကလေးစစ်သားများပြားမှုတွေကြောင့်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
အရင်းတုန်းကဆို ၁၉၉၅ ခုနှစ်အလွန်တွင်ပြည်တွင်းနိုင်ငံရေးအင်းအားစုများနှင့်ဒီမိုကရေစီအင်းအားစုများကိုအသက်ရှူကြပ်အောင်ဖိနှိပ်ထားပြီးလက်နက်ကိုင်အင်းအားစုများနှင့်ပြည်ပရှိဒီမိုကေ၇စီအင်းအားစုများကိုအသက်ရှူချောင်အောင်လုပ်ထားသည်၊ယခုတစ်ဖန်ကတော့၊ပြည်တွင်းရှိနိုင်ငံရေးအင်းအားစုများနှင့်ဒီမိုကရေစီအင်းအားစုများကိုအသက်ရှူပေါက်ချောင်အောင်ဖွင့်ပေးထားပြီးနယ်စပ်ဒေသရှိလက်နက်ကိုင်အင်းအားစုများနှင့်ပြည်ပရှိနိုင်ငံရေး၊ဒီမိုကရေစီအင်းအားစုများကိုအသက်ရှူလမ်းကြောင်းကြပ်သွားအောင်၊ပိတ်သွားအောင်လုပ်ဆောင်လျက်ရှိသည်ကိုထင်ထင်ရှာရှာတွေ.ရသည်၊ထို.ကြောင့်၊လက်ရှိသိန်းစိန်းအစိုးရကအပြောင်းအလဲလုပ်နေတယ်၊ဒီမိုကရေလမ်းကြောင်းသွားနေတယ်ဆိုသည့်ယုံကြည်လွယ်နေသူများနှင့်နိုင်ငံရေးကိလေသာမထိန်းချုပ်နိုင်သူများကပြောဆိုနေကြတာဟာနိုင်ငံရေးသတိ၊သမာဓိ၊ပညာနှင့်သီလလုံသူများအတွက်ဘာမှအကျိုးသက်ေ၇ာက်မှုမရှိစေဘဲ၎င်းယုံကြည်လွယ်သူများအတွက်သာဆိုးကျိုးများသက်ရောက်လိမ္မည်.ဟုတိုင်းရင်းသားအသံမှယုံကြည်သည်၊ဒါကြောင့်၊ယုံကြည်လွယ်သူများနဲ.ယုံကြည်ခက်သူများအကြားနှစ်ဖက်သဘောတူညီမှုရှိနိုင်အောင်အလယ်အလတ်လမ်းစဉ်ကိုကျင့်သုံးရမည်၊ပညာလွန်လျှင်ကဲ၊သမာဓိလွန်လျှင်လဲ၊ဆိုသည့်စကားအတိုင်းဘဲဒီမိုကရေစီအင်းအားစုများနှင့်လက်နက်ကိုင်တိုင်းရင်းသားအနေနဲ.မိမိလုပ်နေကြအလုပ်များကိုအစီအစဉ်မပြောင်း၊စိတ်မယောင်ကြဘဲဆက်လက်လုပ်ဆောင်နိုင်မှသာလျှင်ဘေးဘယာလည်းကင်း၊ပန်းတိုင်ဆီလည်းဝင်နိုင်တော့မှာဖြစ်ကြောင်းတင်ပြလိုက်ရပါသည်၊
ကချင်ပြည်နယ် မိုးမောက်မြို့နယ်၊ ကျောက်စခန်း (ခ၀မ်ဘန်) အနီးတွင် အောက်တိုဘာလ ၁၇ ရက်နေ့မှ စတင်ပြီး ကေအိုင်အေ တပ်မဟာ ၃ လက်အောက်ခံ တပ်များနှင့် မြန်မာအစိုးရ စစ်တပ်တို့ တိုက်ပွဲ အပြင်းအထန် ဖြစ်ပွားနေကြောင်း သိရသည်။ အောက်တိုဘာလ ၁၈ ရက်နေ့ ညနေပိုင်း ၅ နာရီခွဲ ၀န်းကျင်တွင် မှု ထိခိုက် ကျဆုံးမှုများသဖြင့် မြန်မာအစိုးရ စစ်တပ်များ နောက်ကြောင်း ပြန်လှည့်သွားကြောင်း သိရသည်။ ယင်းတိုက်ပွဲတွင် မြန်မာအစိုးရ စစ်တပ်မှ ၄၀ နှင့် ၅၀ ကြားထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရရှိသွားကြောင်း ဒေသခံများမှ သိရသည်။
ကျောက်စခန်း ကျေးရွာသားများအား ထိခိုက်ဒဏ်ရာရ၊ သေဆုံးသည့် မြန်မာအစိုးရ တပ်ဖွဲများကို သယ်ယူ စေခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ ကေအိုင်အေဘက်မှ တဦးကျဆုံးခဲ့သည်။ ကေအိုင်အေ တပ်ဖွဲ့များမှ မြန်မာအစိုးရ စစ်တပ်၏ လက်နက်ကြီးငယ်၊ ခဲယမ်းမီး ကျောက် အများအပြား သိမ်းဆည်း ရမိကြောင်းသိရသည်။
အောက်တိုဘာလ ၁၈ ရက်နေ့တွင် မြစ်ကြီးနား- လိုင်ဇာလမ်း၊ ၀ိုင်းမော်၊ ရွေညောင်ပင် – ဂါးရာယန် ကျေးရွာကြားတွင် တိုက်ပွဲ ဖြစ်ပွားနေသည်မှာ ၆ ရက်ကြာ ခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ အောက်တိုဘာလ ၁၈ ရက်နေ့တွင် ဖြစ်ပွားသည့် တိုက်ပွဲများတွင် မြန်မာအစိုးရ စစ်တပ်မှ ယောက် ၂၀ ကျော် ကျဆုံးပြီး ၃၀ ကျော်ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရရှိသွားကြောင်း သိရသည်။ ကေအိုင်အေဘက်တွင် ထိခိုက် သေဆုံးမူလုံးဝ မရှိကြောင်းသိရသည်။
မြစ်ကြီးနား – လိုင်ဇာ ကားလမ်း၊ နမ်ဆန်ယန် ကျေးရွာတွင် မြန်မာအစိုးရ စစ်တပ် ခလရ ၁၂၁ မှကျေးရွာ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွင် -၀င်ရောက် တပ်စွဲထားပြီး ဘုန်တော်ကြီးကျောင်း တ၀ိုက်တွင် ကတုတ်ကျင်းများ တူးထားကြောင်း သိရသည်။ နှစ်ခြင်းခရစ်ယာန် ဘုရားကျောင်းဝင်း အတွင်း ခမရ ၄၃၈ မှ ၀င်ရောက်နေရာ ယူထားပြီး ပတ်လည်တွင် ကတုတ်ကျင်းများ တူးထားကြောင်း သိရသည်။
မြန်မာအစိုးရစစ်တပ် ၏ အပြစ်မဲ့ရွာသားများအပေါ် လူမဆန်စွာနှိပ်ဆက်ညှင်းပမ်းမှူ
မြန်မာအစိုးရစစ်တပ် ရက်စက်မှုက ကမ်းကုန် ( အောက်တိုဘာ ၁၉) မြန်မာအစိုးရစစ်တပ် မှ ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် ကေအိုင်အေနှင့် တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေသော ဒေသတစ်လျှောက် ဒေသခံရွာသူရွာသားများအပေါ် လူ့ အခွင့်အရးချိုးဖောက်မှုများ ပြောင်ပြောင်တင်းတင်း ကျုးလွန်ဖောက်ဖျက်နေဆဲဖြစ်ရာ မနေ့ က အောက်တိုဘာ(၁၈)ရက်နေ့ တွင် ကေအိုင်အေ ထိန်းချုပ်နယ်မြေ အောင်ဂျာကျေးရွာ( Aung Ja Mare )အနီးရှိ လီဆူးတိုင်းရင်းသားများ အများစုနေထိုင်ရာ လိုင်လွမ်ကျေးရွာ( Lai Lum Kahtawng) အတွင်းမှ လီဆူးတိုင်းရင်းသားတစ်ဦးအားမြန်မာစစ်တပ်မှ အကြောင်းမဲ့ဖမ်းဆီးစွပ်စွဲကာ အားရအောင်နှိပ်စက်ပြီး လက်နှစ်ဖက် ခြေနှစ်ဖက် အရှင်လတ်လတ် ခုတ်ဖြတ်ပစ်ကာ ကားစင်တင်ပြီး မသေမရှင် ပစ်ထားကြောင်း ဒေသခံများမှ သတင်းပေးပို့ လာပါသည်..။ October (19) bat Masum Wunpawng Mungdan Shanglawt AsuyaaUp hkang ginra rai nga ai Awng Ja mare makau, Lai Lum Lisu kahtawng na Lisu la langai hpe October (18) ya sha ni myen hpyen la ni kawn lata lahkawng maga, Lagaw lahkawng maga hkaru tum kaw na tawk di kau ya jen da ai lam shiga na chye lu ai. ( Jinghpaw Kasa )
Today, the U.S. Marine Corps Humanitarian Assistance Survey Team (HAST) met with the Royal Thai Armed Forces to discuss the flood situation in Thailand. Following the meeting, the HAST, along with the Thai military, will fly via helo to see some of the areas affected by the floods.
ฝูงเรือบรรทุกเครื่องบิน ยูเอสเอส จอร์ช วอชิงตันได้ออกจากท่าเรือสิ
งคโปร์เพื่อเข้าประจำในจุดที่เหมาะสมสำหรับเตรียมการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมถ้ามีความจำเป็น จากสภาวะอุทกภัยครั้งร้ายแรงที่สุดในรอบหลายปีของไทย | The USS George Washington (CVN 73) Carrier Strike Group departedaport visit in Singapore to be in better position to provide humanitarian aid if needed in the wake of the worst flooding in many years in Thailand.
မြန်မာအစိုးရ စစ်တပ် မှ နန်ဆန်ယန်ရွာ ကိုမီးရှို. ဖျက်စီးနေ
အောက်တိုဘာလ ၁၆ နေ.တွင် မြန်မာအစိုးရ စစ်တပ်များသည် မိုးမောက်မြို.နယ်၊ ဒေါ.ဖုံယာန်မြို.နယ်ခွဲ၊ နန်ဆန်ယန်ကျေးရွာ သို.၀င်ရောက် လာပြီး ဘာသာရေး ဘုရားကျောင်းဝင်း များတွင် စုစုပေါင်းအင်အား ၂၀၀ ခန်. နေရာယူထားကြောင်း သိရသည်။ မြန်မာအစိုးရ စစ်တပ်များသည် ရွာသားများကို အကြောင်းမဲ. ဖမ်းဆီး နှိပ်စက်ပြီး၊ လူနေအိမ် ၅ လုံးကို မီးရှို့ကာ ရွာသား ဌေးမောင်ကိုလည်း သတ်ပစ်ခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ ထို့ပြင် ကတ်သလစ် ဓမ္မဆရာဦးအောင်လီနှင်. ရွာသား (၅)ဦး ကိုလည်း အကြောင်းပြချက် မရှိဘဲ ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင် ထားကြောင်းသိရသည်။
အောက်တိုဘာလ ၁၇ နေ. ယနေ. နံနက်ပိုင်းတွင် နန်ဆန်ယန်ကျေးရွာ ရှိ လူနေအိမ်များ ကို အကြောင်းမဲ. လိုက်လံ မီး ရှို့ဖျက်စီး နေကြောင်း သတင်း ရရှိသည်။
Tuesday, 11 October 2011 14:38
Written by နိုင်ဟံသာ
ဦးသိန်းစိန်သမ္မတဖြစ်လာသော ကြံ့/ဖွံ့အစိုးရခေတ် ၂၀၁၁ ခု၊ မတ်ခ်ျလကစ၍ ရှမ်းပြည်နယ်မြောက် ပိုင်းဒေသမှာတိုက်ပွဲဖြစ်လာပြီး ကချင်ပြည်နယ်တွင်မူ ဇွန်လမှစ၍တိုက်ပွဲဖြစ်လာသည်။ ဤတိုက်ပွဲများသည် အရှိန်လျှော့ကျသွားခြင်း မရှိပဲ တဆင့်ပြီးတဆင့် မြင့်၍ ပြင်းထန် လာနေသည်။ အနှစ် (၂၀) ခန့် သေနတ်သံ တိတ်နေသော ဒေသတွင် ယခုကဲ့သို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပေါ်ပြင်းထန်လာနေရခြင်းကိုအရင်းစစ်ကြည့်သော် အကြောင်းမျိုးစုံရှိ သည်ဟုပြောနိုင်သော်လည်း အဓိကမှာ နိုင်ငံခြား စီးပွားရေး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကို အထောက်အကူ ပေးရန် ဖြစ်နေသည်ကို တွေ့ရသည်။
နိုင်ငံခြား ကုမ္ပဏီကြီးများသည် ၎င်းတို့ နိုင်ငံနှင့် ၎င်းတို့ အကျိုးကို ရည်စူးထားခြင်း ဖြစ်ပြီး အရိုးအရင်း လောက်ကိုသာ ခံစားရသော ကျွန်ုပ်တို့ နိုင်ငံမှ နိုင်ငံသားအချင်းချင်းသတ်ဖြတ်နေရခြင်းမှာ အလွန်ကို ဝမ်းနည်းဖွယ် ကောင်းပါသည်။ ဤအကြောင်းရပ်ကို ပိုမို မြင်သာအောင် သုံးသပ် တင်ပြ လိုပါသည်။လွန်ခဲ့သော ၂၀၀၆ ခုနှစ်တွင် နအဖ စစ်အစိုးရနှင့်တရုတ်အစိုးရတို့သည် မြစ်ချောင်းများကိုပိတ်ပြီးဆည် တည်ဆောက်ကာ လျှပ်စစ်ဓါတ်အား ထုတ်ယူရန် သဘောတူ လက်မှတ်ရေထိုး ခဲ့သည်မှာ အနည်းဆုံး (၉) နေရာ မျှရှိပါသည်။ ၎င်းဆည်ကြီး များအနက် မြစ်ဆုံဆည်သည် အကြီးမားဆုံး ဖြစ်ပြီး ပြည်သူနှင့် သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ကို ဒုက္ခများစွာ ဖြစ်စေ နိုင်သောကြောင့် ပြည်သူတို့၏ တောင်းဆိုမှုအရ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က မြစ်ဆုံဆည် တည်ဆောက် နေခြင်းကို ရပ်ဆိုင်းကြောင်း ထုတ်ပြန် ခဲ့သည်ကို အများသိပြီး ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အတူ ရှမ်းပြည်နယ်တွင်လည်း ဆည်ကြီး (၈) ခုလောက် တည်ဆောက်ရန် ရှိနေပါသည်။
၎င်းအပြင် ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း တရုတ်ပြည်နယ်စပ် မူဆယ်မြို့အနီးမှ ရခိုင်ပြည် ကျောက်ဖြူမြို့အထိ မြန်မာပြည်ကို စလွယ်သိုင်း ဖြတ်၍ ဓါတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်းနှင့် ရေနံပိုက်လိုင်း နှစ်ခုကို ယှဉ်ပြိုင် သွယ်တန်း မြှုပ်နှံရန် စီမံကိန်းကြီး ရှိပါသည်။ ထိုပိုက်လိုင်း နှစ်ခုအပေါ်တွင် ကားလမ်းနှင့် ရထားလမ်းတို့ကို ထပ်မံ တည်ဆောက်ရန်လည်း ရှိ်ပါသည်။ ဤသည်တို့ကား တန်ဖိုးကြီးမားပြီး ထင်ရှားသော လုပ်ငန်းများ ဖြစ်သည်။ မိမိတို့ တွေ့ရှိထားသော စာရင်းအရ ကချင်ပြည်နယ် အတွင်းရှိ ဆည်ကြီး နှစ်ခုအတွက် ရာထားငွေမှာ အမေရိကန် ဒေါ်လာ (၅.၀၃၀) ဘီလျံ၊ ရေနံနှင့် သဘာဝ ဓါတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်း စီမံကိန်းအတွက် (၂.၁၄၆) ဘီလျံနှင့် မုံရွာမြို့ အနီးရှိ လက်ပတောင် ကြေးနီလုပ်ငန်း အတွက် ဒေါ်လာသန်းပေါင်း (၉၉၇) ရှိသည်ဟု သိရသည်။
တရုတ်ပြည်သည် လွန်ခဲ့သော နှစ်အနည်းငယ် အတွင်းက အရှိန်အဟုန် ကောင်းကောင်းဖြင့် စီးပွားရေး တိုးတက်လာခဲ့ရာ ယခုအခါ စက်ရုံကြီးများနှင့် မော်တော်ယာဉ်များ အလွန် တိုးပွား များပြားလာနေပါသည်။ ထိုစက်ရုံ ကြီးများ အရှိန်အဟုန်မပျက် လည်ပတ်နိုင်ရေးနှင့် မော်တော်ယာဉ်များ သွားလာ နိုင်ရေးအတွက် လျှပ်စစ်ဓါတ်အားနှင့် လောင်စာဆီများ အလွန်ကိုလိုအပ်နေပါသည်။ ယခင်က အသုံးပြု လာခဲ့သော ကျောက်မီးသွေးများ ရှားပါးလာပြီး ရေအားလျှပ်စစ် စက်ရုံများ ထပ်မံ တည်ဆောက်ရန် နေရာလည်း ရှားပါးလာနေသည်။ ထို့ကြောင့် ထပ်မံ တိုးလာမည့် စက်ရုံများ အတွက်ကိုပါ ဖြည့်ဆည်းနိုင်ရန် လျှပ်စစ်ဓါတ်အား အထူးလိုအပ် နေသောကြောင့် လျှပ်စစ်ဓါတ်အားကို ရရှိနိုင်ရန် နယ်စပ်ခြင်း ကပ်နေသည့် ကချင်ပြည်နယ်နှင့် ရှမ်းပြည်နယ်တို့တွင် ဆည်များ တည်ဆောက်ပြီး လျှပ်စစ်ဓါတ်အား ထုတ်ယူနိုင်ရန် ကြိုးပမ်း လာကြသည်။
ဤပိုက်လိုင်းသည် တရုတ်ပြည်သူများ၏ အနာဂတ်အတွက် အလွန် တန်ဖိုးကြီးမားသော ရတနာပိုက်လိုင်း ဖြစ်နေသော်လည်း ပိုက်လိုင်း ဖြတ်သန်းရာ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မကွေးတိုင်း၊ မန္တလေးတိုင်းနှင့် ရှမ်းပြည်နယ်ရှိ ပြည်သူများအတွက် အခက်အခဲများစွာ ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ကုမ္ပဏီ ဝန်ထမ်းများ အလုပ်သမား များအတွက် အဆောက်အဦးများ၊ ရေနံ သိုလှောင်ကန်များ၊ လုံခြုံရေး တပ်ဖွဲ့များအတွက် စခန်းများ ဆောက်လုပ်ရန်နှင့် ပိုက်လိုင်း သွယ်တန်းရန်အတွက် ၄င်းလမ်းကြောင်းပေါ်ရှိ ဒေသခံ ပြည်သူများ၏ လယ်ယာ ခြံမြေများကို သိမ်းယူခြင်း ကျေးရွာများကို ရွှေ့ပြောင်း စေခြင်းများ ရှိခဲ့သည်။ ပိုက်လိုင်း လမ်းကြောင်းတလျှောက်ရှိ မကွေးတိုင်း၊ မန္တလေးတိုင်း တို့တွင်လည်း အိမ်များ၊ ရွာများပြောင်းရွှေ့ခံရခြင်း လယ်ယာခြံမြေများ များစွာ ပျက်စီးခြင်းများ ရှိခဲ့သည်။ ဤနစ်နာမှုများအတွက် လျော်ကြေးပေးမည်ဟုပြောနေပြီး မရသေးသူတွေကအများစု၊ အချို့လည်း အနည်းအကျဉ်းမျှသာ ရရှိကြောင်း ကြားသိရသည်။ အာဏာပိုင်များ ဖြတ်စား လာဘ်စားမှုများ နေသော နိုင်ငံတခုတွင် အမှန်တကယ် နစ်နာရသော ပြည်သူများ လျော်ကြေး အပြည့်အဝ ရရှိရန် ဖြစ်နိုင်မည် မဟုတ်ပါ။
ဤလုပ်ငန်းစဉ်များအတွက် မြန်မာအစိုးရမှလုံခြုံရေကိစ္စများကိုတာဝန်ယူထားသည်။ ပိုက်လိုင်း လုံခြုံရေး အတွက်ကြည်းတပ်မှ တပ်ရင်း (၂၈) ရင်း ချထားမှာ ဖြစ်ပြီး ရေပြင်နှင့် ကမ်းစပ်တွင် ရေတပ်နှင့် ရဲတပ်ဖွဲ့များကို လည်းတိုးချဲ့ချထားသည်။ ရှမ်းပြည်နယ် မြောက်ပိုင်းတွင် ပိုက်လိုင်း ဖြတ်သန်းသွားရာ လမ်းတလျှောက်ရှိ ကျေးရွာများမှ ရွာသားများကို စစ်ပညာ သင်ကြားပေးပြီး ဒေသခံ ပြည်သူ့စစ်အဖြစ် ဖွဲ့စည်းနေပါသည်။ ဤသည်တို့မှာ သာမာန် လုံခြုံရေး အစီအစဉ်သာ ဖြစ်ပြီး ထူးခြား နေသည်မှာ ပိုက်လိုင်း လမ်းကြောင်းဂွင်တွင် အခြေပြုနေသော ရှမ်းပြည် တိုးတက်ရေး ပါတီ / ရှမ်းပြည် တပ်မတော် (SSA/N) အဖွဲ့ကို ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ မတ်ခ်ျလ (၁၃) ရက်နေ့မှစပြီး ထိုးစစ်ဆင် တိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။ အစိုးရတပ်၏ ထိုးစစ်သည် တဆင့်ပြီး တဆင့် တိုးမြင့် လာခဲ့ရာ ဇွန်လ (၃) ရက်နေ့ ရှမ်းပြည် တပ်မတော်၏ (၇) မိုင် စခန်းကို အင်အား အလုံးအရင်းဖြင့် တိုက်ခိုက်လာသည်။
ထိုတိုက်ပွဲတွင် အစိုးရတပ်မှ ဓါတုဗုံးကျည်များဖြင့်လည်း ပစ်ခတ်ခဲ့ကြောင်း ရှမ်းပြည် တပ်မတော်မှ အရာရှိများ ပြောပြ၍ သိရသည်။ ယင်းကိစ္စ အမှန်တကယ် ဖြစ်ခဲ့ကြောင်းကို ထိခိုက်ခဲ့သူများနှင့် ၎င်းတို့၏ အဝတ်အစားများကို ပညာရှင်များက ဓါတ်ခွဲစမ်းသပ်ပြီး အတည်ပြုခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ ယနေ့အထိ ကာလအားဖြင့် (၆)လကျော်တိုက်ပွဲအတွင်း တိုက်ပွဲအကြိမ် ပေါင်း (၃၀၀)ကျော် ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး နှစ်ဖက်စလုံးမှ ကျဆုံး ဒဏ်ရာရသူများမှာ (၁၀၀၀) ကျော်နေပြီဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း တိုက်ပွဲ အရှိန်မှာ လျော့ကျ ပြီးဆုံးနိုင်ခြင်း မရှိသေးပါ။
၎င်းအပြင် ကချင်ပြည်နယ်တွင် တာပိန်ရေအားလျှပ်စက်ရုံစစ်လုံခြုံရေးကိုအကြောင်းပြုပြီး အစိုးရတပ်က ကချင်ပြည် လွတ်လပ်ရေး တပ်မတော် (KIA) ကို ဇွန်လ (၉) ရက်နေ့တွင် စတင် တိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။ ထိုအချိန်က စခဲ့သော တိုက်ပွဲသည် ဖြေရှင်း၍ မရတော့ပဲ ကျယ်ပြန့် ပြင်းထန်လာခဲ့ရာ အစိုးရဖက်မှ တပ်မအလိုက် စေလွှတ် တိုက်ခိုက်လာခဲ့သည်။ စက်တင်ဘာလ အကုန်ပိုင်းက ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း ပိုက်လိုင်းလမ်းကြောင်း ဂွင်တွင် အခြေပြုနေသော ကချင် (KIA) တပ်မဟာ (၄) ဌာနချုပ်စခန်းနှင့်တပ်ဖွဲ့များကို (၁၂၀) မမ အမြောက်ကြီးများဖြင့် တိုက်ခိုက် ခဲ့ပါသည်။ ၎င်းနောက်တွင် ကချင်ပြည်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ (KIO) ဌာနချုပ်ရှိရာ လိုင်ဇာမြို့ဘက်သို့ ထိုးစစ်ဆင်ရန် ပြင်ဆင် နေပြန်သည်ဟု ကြားသိရပါသည်။ ကချင်နှင့် ဖြစ်ပွားခဲ့သော တိုက်ပွဲများတွင်လည်း နှစ်ဖက်စလုံးမှ ကျဆုံး ဒဏ်ရာရသူပေါင်း ထောင်ဂဏန်း ရှိပါသည်။
ဤတိုက်ပွဲများကြောင့် ရှမ်းပြည်နယ်တွင် တောတောင် လျှိုမြောင်များအကြား ထွက်ပြေး ခိုလှုံနေရသူ စစ်ပြေး ဒုက္ခသည် (၃၀၀၀၀) ကျော် ရှိပြီး ကချင်ပြည်နယ် တွင်လည်း တရုတ်နယ်စပ် တဝိုက်တွင် စစ်ပြေး ဒုက္ခသည် (၃၀၀၀၀)ကျော် ရောက်ရှိနေကြောင်း သိရသည်။ ယင်းစစ်ပွဲများကြောင့် သာမာန် ပြည်သူ အရပ်သားထဲမှ သတ်ဖြတ်ခံရသူ ပေါ်တာ အထမ်းသမားအဖြင် လိုက်ပါရသူ မုဒိန်းကျင့်ခံရသူ ရိုက်နှက် ညှင်းပန်း ခံရသူများစွာ ရှိသည်မှာ အထူး ပြောပြရန် လိုမည်မထင်ပါ။ လယ်ယာ လုပ်ငန်းများကို စွန့်ပစ် ထားရသဖြင့် လာမည့်နှစ်တွင် ဆန်ရိက္ခာ ကြပ်တည်းစေပါလိမ့်မည်။
နှစ်ဖက်သော တိုက်ခိုက်နေသူများ၏ လက်နက်ခဲယမ်း တန်ဖိုး၊ ပျက်ဆီးသွားရသော အိုးအိမ်၊ လမ်းတံတားများ၏ တန်ဖိုးများသည်လည်း မနည်းပါ။ ငွေကြေးဖြင့် ထည့်တွက်၍ မရနိုင်သော လူ့အသက်ပေါင်း များစွာနှင့် အစိုးရနှင့် တိုင်းရင်းသား တော်လှန်ရေး အင်အားစုများအကြား ပျက်ပြား သွားရသော ယုံကြည်မှု၊ မတူ ကွဲပြားနေသော တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများအကြား ပျက်ပြားသွားရသော စည်းလုံးညီညွတ်မှု တန်ဘိုးများကိုပါ ထည့်တွက်လျှင် နစ်နာ ဆုံးရှုံးမှုတန်ဘိုးများအလွန်များပြားပါသည်။
နအဖ စစ်ခေါင်းဆောင်များ ဤစီမံကိန်းကိုလက်ခံခဲ့စဉ်က ငွေနှင့် လက်နက် မည်၍မည်မျှ လက်ခံ ရလာခဲ့သည်ကို ပြောမပြ နိုင်သော်လည်း မေလ (၂၇) ရက်နေ့ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် တရုတ်ပြည်က ပြန်လာစဉ် ချေးငွေအဖြစ် အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၇၆၅) သန်းရရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ၎င်းအပြင် ကချင်အဖွဲ့ကို စတင် တိုက်ခိုက်ပြီး မကြာမီ ဇွန်လ အကုန်ပိုင်းတွင် တရုတ်ပြည်မှ HOWO ကုမ္ပဏီထုတ် SINO အမျိုးအစား (၆) ဘီးတပ် မော်တော်ယာဉ် အစီးပေါင်း (၅၀၀) နှင့် ယင်းကားပေါ်တွင် တာလပတ်ဖြင့် ဖုံးအုပ်ထားသော လက်နက်နှင့် ကျည်များဟု ထင်ရသည့် စစ်ပစ္စည်းများ ရခဲ့ကြောင်း တရုတ်နယ်စပ်ရှိ သတင်းဌာနများက ဓါတ်ပုံနှင့်တကွ ဖော်ပြထားသည်ကို တွေ့ရသည်။
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် အစိုးရသည် တရုတ်နိုင်ငံမှ ရရှိလာသော ငွေကြေးနှင့် စစ်လက်နက် ပစ္စည်းများကို ပိုမို တန်ဘိုးထား မည်လား။ ထိုငွေကြေးနှင့် စစ်လက်နက် ပစ္စည်းများကို လက်နက်ကိုင် တိုင်ရင်းသား အင်အားစုများကို ချေမှုန်းရန် အသုံးပြု လိုက်ခြင်းဖြင့် နိုင်ငံနှင့် ပြည်သူအတွက် အကျိုးများစွာ ဖြစ်ထွန်းစေမည်လား။ ရေတို ရေရှည် အကျိုးနှင့်အပြစ်ကို ရှုမြင်သုံးသပ်ရန် လိုပါသည်။
တရုတ်ပြည်မှ ဝင်ရောက် လာနေသော စီးပွားရေး အရင်းအနှီးများကြောင့် အနာဂါတ်တွင် ရင်ဆိုင်ရမည့် မြန်မာပြည်၏ အန္တရာယ်များကို သုံးသပ်ကြည့်လျှင် -
(၁) တရုတ်ပြည်သည် လူဦးရေ၊ စီးပွားရေးအင်အား၊ စစ်အင်အားတို့တွင်ထိပ်တန်းရောက်နေပြီး ကမ္ဘာ့ကုလ သမဂ္ဂတွင်လည်း ဗီတိုအာဏာ ရထားသော နိုင်ငံဖြစ်သည်။ ယနေ့ ကမ္ဘာတွင် စူပါပါဝါ နိုင်ငံတခုဖြစ်သည်။ ဤသို့သော နိုင်ငံတခုမှ စီးပွားရေး အရင်းအနှီး ကြီးကြီးမားမား ဝင်ရောက် မြှုပ်နှံပြီးပါက ထိုအရင်းအနှီးများကို ကာကွယ်ရန် ၎င်းတို့၏ သြဇာအာဏာကို မလွဲဧကန် ထုတ်သုံး လာပါလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့် မြန်မာပြည်သည် တရုတ်သြဇာခံ နိုင်ငံတခု ဖြစ်လာရန် များစွာ သေချာ နေပါသည်။
(၂) ယခု ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်နေသော စီးပွားရေး စီမံကီန်းများစွာတွင် တရုတ်ပြည်မှ အလုပ်သမားများကို အများစုအသုံးပြုထားသည်။ ဤစီမံကိန်း လုပ်ငန်းများနှင့် ဆက်စပ်ပြီး တရုတ်နိုင်ငံသား သိန်းဂဏန်း နီးပါး မြန်မာပြည် အတွင်းသို့ ရောက်ရှိလာနေသည်။ ယခင် လွန်ခဲ့သော နှစ်အချို့ကလည်း တရုတ်လူမျိုးများ အသွင်သဏ္ဍာန် အမျိုးမျိုးနှင့် မြန်မာပြည် အတွင်သို့ သိန်းနှင့်ချီ၍ ဝင်ရောက် ထားပြီး ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည် နည်းနာ အမျိုးမျိုးဖြင့် နိုင်ငံသား မှတ်ပုံတင် ကာဒ်ပြားရအောင် လုပ်ဆောင် နိုင်ခဲ့ကြသည်။ မြန်မာပြည် မြောက်ပိုင်းရှိ မြို့ကြီး တော်တော် များများတွင် ယခုအခါ တရုတ်လူမျိုး၊ တရုတ်စီးပွားရေး၊ တရုတ် ယဉ်ကျေးမှုများဖြင့် ဖုံးလွှမ်း လာနေသည်။ တရုတ်ပြည်သည် အဝေးရောက် တရုတ်လူမျိုးများကို အကာအကွယ် ပေးရန် ပေါ်လစီ ချထားသည်။ ထို့ကြောင့် ဤတရုတ် လူမျိုးများ အရေးသည် အနာဂတ်တွင် မိမိတို့ နိုင်ငံအတွက် ဖြေရှင်းရန် မလွယ်သော ပြဿနာကြီး တခု ဖြစ်လာ ပါလိမ့်မည်။
(၃) တရုတ်ပြည်သည် ၁၉၅၉ ခုနှစ်တွင် တိဘက်နိုင်ငံကို သိမ်းယူခဲ့သည်။ ထိုသို့ သိမ်းယူပြီးနောက် တရုတ်လူမျိုး ထောင်သောင်း များစွာကို ပို့လွှတ်ခဲ့သည်။ ယခုအခါ တိဘက် နိုင်ငံတွင် တရုတ်လူဦးရေ (၈၀) ရာခိုင်နှုန်းမျှ ဖြစ်နေလေပြီ။ တိဘက် မျိုးချစ်များသည် အိမ်နီးချင်း နိုင်ငံများတွင် စစ်ပြေး ဒုက္ခသည် များအဖြစ် ခိုကပ် နေရသည်။ ကမ္ဘာ့ ကုလသမဂ္ဂနှင့် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံ ကြီးများလည်း တိဘက်ကို မကယ်နိုင်တော့ပါ။ တိဘက်ခေါင်းဆောင် ဘုန်းတော်ကြီး ဒလိုင်လားမားပင်လျှင် သွားလိုရာ သွားလို့မရဖြစ်နေရသည်။ နယ်မြေခြင်း ဆက်စပ်နေပြီး အထက်ပါ အချက် ၁/၂ တို့ အခြေခိုင် လာပါက မြန်မာပြည်သည်လည်း ဤအခြေအနေမျိုး ဖြစ်မလာနိုင်ဘူးလား။
ထို့ကြောင့် တရုတ်ပြည်၏ စီးပွားရေး အရင်းအနှီးကို လက်ခံပြီး ၎င်းတို့ထံမှ ရလာသော ငွေကြေး၊ လက်နက် အကူအညီများဖြင့် မိမိတို့ နိုင်ငံသား အချင်းချင်းအပေါ် စစ်ပြု တိုက်ခိုက် နေခြင်းသည် တိုင်းပြည်ကို အကျိုးပြုသော လုပ်ရပ်ဖြစ်ပါသလား။ လေးလေးနက်နက် ထည့်တွက် စေလိုသည်။ မိမိတို့ နိုင်ငံသား အချင်းချင်း ညီညွတ်မှု ပျက်ပြားပြီး ပဋိပက္ခ ကြီးမားနေပါက ပြင်ပ အန္တရာယ်ကို ဖိတ်ခေါ်နေသည့် သဘော ဖြစ်မနေ စေဘူးလား။ မျိုးချစ် ပြည်ချစ် နိုင်ငံသားများ အမြန် ဆုံးဖြတ်ရမည့် ကိစ္စရပ် ဖြစ်ပါကြောင်း တင်ပြအပ်ပါသည်။
မြစ်ဆုံစီမံကိန်း ရပ်မည်ဟူသော သမ္မတဦးသိန်းစိန် ကတိစကား မြစ်ဆုံဒေသခံတို့ ယုံကြည်ရန်ခက်ခဲ
အောက်တိုဘာ ၅ ရက်နေ့ လွတ်တော်အစည်းဝေးတွင် သမ္မတဦးသိန်းစိန်မှ ၄င်း၏ သမ္မတသက်တမ်းအတွင်း မြစ်ဆုံစီမံကိန်းကို ရပ်ဆိုင်းထားမည်ဟူသော ကတိ စကားကို မြစ်ဆုံဒေသခံများအနေနှင့်အကြီးအကျယ်သံသယပွားနေကြောင်းသိရသည်။ မြစ်ဆုံစီမံကိန်း ရပ်ဆိုင်းပြီဟု ပြည်တွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာသို့ကြေညာခဲ့သော်လည်း လက်တွေ့တွင် ယခင်က အခြေအနေအတိုင်း နေ့ရောညပါ ယဉ်ကြီးယဉ်ငယ်များဖြင့် နေ့မအားညမနား ဆက်လက် အကောင်အထည်ဖော်နေကြကြောင်း မြစ်ဆုံဒေသခံများ ပြောကြားချက်အရသိရသည်။
အောက်တိုဘာလ ၁၃ ရက်နေ့တွင် တန်ဖဲကျေးရွာနေ သူများကိုပြောင်းရွေ့ တည်ပေးသည့် အောင်မြေသာကျေးရွာသို့ မြန်မာအစိုးရ စစ်တပ်မှ ည ၁၀ နာရီခွဲနောက်ပိုင်းတွင်အပြင်မထွက်ရန် လာရောက်ပြောဆိုခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ ထိုပြင် အောက်တိုဘာ ၁၅ ရက်နေ့တွင် ရပ်ဆိုင်းလိုက်ပြီဆိုသည့် မြစ်ဆုံသဲသောင်ပြင် နေရာတွင် ပြုလုပ်ရန် စီစဉ်ထားသည့် ဆုတောင်းပွဲ ကိုလည်း အေးရှားဝေါ ကုမ္မဏီမှ နေရာမပေးနိုင်ကြောင်းပြောဆိုငြင်းပယ်ခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ ယင်းနေရာသည် တန်ဖဲနှစ်ခြင်းအသင်းတော်မှ လူငယ်များနှစ်စဉ် ၀တ်ပြုကိုးကွယ်ရာနေရာဖြစ်သည်။
စီမံကိန်းရပ်တန့်ထားသည် ဆိုသော်လည်း လိုဏ်ခေါင်းဖော်လုပ်များကို ယခင်အတိုင်းဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေသည့် အပြင် တန်ဖဲကျေးရွာမှ ၁ သိန်းတန်မြေကွက်များကို အဆ ၄၀ မှ ၅၀ ထိပေးဝယ်နေပြီး ရွေလုပ်ကွက်များ အဖြစ်ဖန်တီးရန် စီစဉ်နေကြောင်း သိရသည်။ တန်ဖဲကျေးရွာမှ အထက်တန်းကျောင်းကိုလည်း အောက်တိုဘာလ ၉ ရက်နေ့တွင်အပြီးဖျက်လိုက်ပြီး ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများအနေနှင့် ရွာတွင် ဆက်လက်နေထိုင်နေထိုင်ခြင်း မရှိစေရန် အမျိုးမျိုးဖန်တီးလျက်ရှိသည်။ ရွေလုပ်ကွက်လုပ်ကိုင်ရန် လျောက်ထားသူများတွင် ကချင်ပြည်နယ်စည်ပင်ဝန်ကြီး ဦးအလေးပါ၊ ကချင်ပြည်နယ်အမျိုးသားလွတ်တော်ဥက္ကဌလည်း ပါဝင်သည်။
လက်ရှိတန်ဖဲကျေးရွာဟောင်းတွင် သင်းအုပ်ဆရာနှင့် အိမ်ထောင်စု ၄ ခုသာကျန်ရှိတော့ကြောင်းသိရသည်။ ကျန်ရှိနေသည့် ရွာသားများကိုလည်း အမျိုးမျိုးဖိအားပေးခြိမ်းခြောက်လျက်ရှိသည်။ ယင်းကဲ့သို့ တန်ဖဲကျေးရွာဖျက်သည့် အစီအစဉ်များကို စနစ်တကျလုပ်နေသည့်ပြင် လုံခြုံရေးစည်းများမှာလည်း ယခင်အတိုင်း တင်းကျပ်မြဲဖြစ်သောကြောင့် မြစ်ဆုံရေကာတာစီမံကိန်းရပ်နားသည်ကို များစွာသံသယဖြစ်နေကြကြောင်းသိရသည်။
ကိုဇာဂနာနဲ.အင်တာဗျူး၊ ၈၈တုန်းက ကျွန်တော်တို့ ဘာကြောင့် လမ်းပေါ်ထွက်ခဲ့ကြလဲ။ ပျင်းလို့ထွက်ခဲ့ကြတာမဟုတ်ပါဘူး။ လိုချင်တာတွေ ရှိလို့ ထွက်ခဲ့ကြတာပါ
မြစ်ကြီးနားအကျဉ်းထောင်မှ ပြန်လည် လွတ်မြောက်လာသည့် ကိုသူရ(ခေါ်)ကိုဇာဂနာအား ရန်ကုန်သို့ လာရောက်ရန် လေယာဉ်ပေါ် မတက်မီအချိန်အတွင်း Eleven Media Group မှ မေးမြန်းချက်အချို့ကို ဖော်ပြလိုက်ပါသည်။
ဖြေ- အေးပေါ့ဗျာ။ လွတ်လာတာတော့ လွတ်လာတာပေါ့။ ဒီလိုလွတ်လာပေမယ့် ကျန်ခဲ့တဲ့သူတွေအတွက် စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်။
ဖြေ- အပြောင်းအလဲဆိုတဲ့ ကိစ္စမှာ အခု တွေ့ကြုံနေရတာတွေကြောင့် အပြောင်းလဲကြီး ဖြစ်နေပြီလားဆိုတာကို မယုံရဲသေးဘူး ဖြစ်နေတယ်။
ဖြေ- ဘာမှတော့ မစဉ်းစာရသေးပါဘူး။ ကျွန်တော့်ညီတွေအတွက် သီချင်းတွေ၊ ပြက်လုံးတွေ လုပ်ရပါဦးမယ်။ ကျွန်တော်တို့ အလုပ်လုပ်ရမယ်။ လုပ်ရမယ့် အလုပ်တွေ မပြီးသေးဘူး။ နိုင်ငံရေးအလုပ်တွေကို ဆက်လုပ်ရဦးမယ်။
မေး- နိုင်ငံရေးအလုပ်ဆက်လုပ်မယ်ဆိုတာက လက်ရှိအခင်းအကျင်းထဲကနေ ပါတီတစ်ခု၊ ပါတီဝင် တစ်ဦးအနေနဲ့ ၀င်ပါမှာကို ပြောတာလား။
ဖြေ- ပါတီထောင်ဖို့၊ ပါတီဝင်လုပ်ဖို့ဆိုတာထက် ၈၈တုန်းက ကျွန်တော်တို့ ဘာကြောင့် လမ်းပေါ်ထွက်ခဲ့ကြလဲ။ ပျင်းလို့ထွက်ခဲ့ကြတာမဟုတ်ပါဘူး။ လိုချင်တာတွေ ရှိလို့ ထွက်ခဲ့ကြတာပါ။ ကျွန်တော်တို့ တကယ်လိုချင်တာ ရပြီလား။ အပြည့်အ၀ မရသေးဘူးဆိုရင် ရအောင်လုပ်ကြရမယ်။ ရန်ကုန်ရောက်မှပဲ ဆက်ပြောကြတာပေါ့။ အခုတော့ လေယာဉ်ပေါ်တက်ရတော့မယ်။
Burma: Political Prisoners Have Not Been Released Yet October, 2011
Amnesty Order announced by Burma Thein Sein government on October 10 is justatrick to the world media and Burmese people. Under his order, no more than 30 political prisoners have been released among the listed six thousands of prisoners that released today. The family of political prisoners feel unhappy, and greatly lost their trust on the new Thein Sein government. They see the Burma new government led by Thein Sein as an insincere one.
တကယ့်တကယ်နိုင်ငံရေးယုံကြည်ချက်ကြောင့်ထောင်ကျနေသူများအတွက်မောင်သိန်းစိန်းရဲ.လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်အောက်မှာလွတ်မြောက်လာသူနည်းပါးပြီး ၅၀ ထက်မကျော်ဟုသတင်းရရှိ၊လူသိထင်ရှားနိုင်ငံအကျဉ်းသားများဖြစ်သည့်မင်းကိုနိုင်၊ကိုကိုကြီး၊ဦးခွန်ထွန်းဦးစသည့်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များ၊တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်များတို.ကိုမလွှတ်ပေးတာဟာပြည်သူလူထုရဲ.ဆန္ဒကိုလက်ရှိမောင်သိန်းစိန်းလူလိမ်အစိုးရကဂရုမစိုက်အလေမထားကြောင်းပြသလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်၊အာဏာရှင်ဆန်ဆန်ကျင့်ကြံနေဆဲဟုလည်းပြောနိုင်သည်၊ပြည်သူ.ဆန္ဒ၊ပြည်သူ.အင်းအားကိုအလေမထားသည့်အပြင်ကမ္ဘာ.မီဒီယာများကိုလိမ်လည်ရန်ရည်ရွယ်နေတယ်၊သိန်းစိန်းအစိုးရကိုစိတ်မချကြနဲ.။
ကချင်ဒေသမှာဗမာစစ်တပ်ကစစ်မျက်နှာအသစ်သုံးခုထပ်ဖွင့်၊ဗမာတပ်ရင်း ၁၂၁ ဝိုင်းရံပိတ်ဆို.ခံနေရ
စစ်မျက်နှာအသစ်သုံးခုကတော့ Ja Ing yang, Bangdawng and Shadan Pa တွေမှာဖြစ်သည်၊အနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်လက်အောက်မှာအတောင်းတင်းဆုံးတပ်ရင်းဖြစ်သည့် တပ်ရင်း ၁၂၁ ကအင်းအား ၂၈၀ လောက်ရှိပြီးအဲဒီတပ်ရင်းအခုဆိုရင်ကေအိုင်အိုတပ်ရဲ.ဝိုင်းရံပိတ်ဆို.ခြင်းခံနေရဆဲဖြစ်ပြီးအသေအပျောက်ကိုတော့စုံစမ်းနေဆဲဟုကချင်းပြည်သတင်းဌာနမှာဖော်ပြထားပါသည်၊
Burmese Army opened three fronts for another major operation
KIA soldiers in front line
A skirmish broke out between KIA soldiers of 15th Battalion under 3rd Brigade and Burmese Army near Bumsen post on Oct 2, 2011 at7am. KLN is still investigating the number of casualties in this battle.
KIA soldiers under 5th Brigade fought against Burmese Army soldiers of 121st LIB under Northern Regional Military Command and 3rd Military Operation Command on Oct 2, 2011 from 12 noon to2pm. KIA soldiers surrounded more than 280 Burmese Army soldiers of 121st, one of the strongest battalion under Northern Regional Command, saidafront line source. The number of casualties has not been reported so far.
Another front line source reported that Burmese Army battalions including 381st LIR, 382nd LIR, 383rd LIR under 3rd MOC and 142nd LIB, 121st LIB under Northern Regional Command are marching towards KIA’s 5th Brigade areas. Burmese Army opened three fronts, Ja Ing yang, Bangdawng and Shadan Pa, in this latest major operation against KIA.
Shanghtin Vimeo မှကူးယူဖော်ပြသည်
သတင်း VDO, အစီရင်ခံစာ Report
ထွန်းအောင်ကျော်ဆောင်းပါးအပေါ်တုံ.ပြန်ကြပါ၊ Responses needed regarding Tun Aung Kyaw's article
Ko Tun Aung Kyaw's article: Read here http://www.scribd.com/fullscreen/67193733?access_key=key-idzcsi3y23iye4on0o7
We neither support the corruption nor the injustice.
ကိုထွန်းအောင်ကျော်ဆောင်းပါ(သူခိုးလက်ကသူဝှက်လု)ကိုဖတ်ရှူလေ့လာပြီးနောက်မဟာလူမျိုးကြီးဝါဒလေသံတွေပါနေတာကိုတွေ.ရသည်၊ဆောင်းပါးရှင်၏နောက်ကွယ်ဖြစ်စေချင်သည့်ဆန္ဒ(လျှိ.ဝှက်ဆန္ဒ)တစ်စုံတစ်ရာရှိနိုင်ကြောင်းတိုင်းရင်းသားအသံကသုံးသပ်သည်၊သူ.ဆောင်းပါးကဟိုပစ်ဒီပစ်ပတ်ရစ်ရေးသားထားပြီးနောက်ဆုံးမှာအရေးယူaction ကဦးဟန်ညောင်ဝေကိုဦးတည်းထားပါသည်၊ဦးဟန်ညောင်ဝေကငွေကြေးချစားမှုကြောင့်အရေးယူသည့်အသွင်မဆောင်ဘဲဦးဟန်ညောင်ဝေကဗမာလူမျိုးတစ်ယောက်မဟုတ်လို.ယာယီညွန်းကြားရေးမှူးခန်.အပ်တာကိုမလိုလာကြောင်းဟုကျနော်တို.မှတ်ယူသည်၊၊ထို.ကြောင့်၊ထွန်းအောင်ကျော်ဆော်အော်ထားသလို Mr. Harald ဆီစာရေးဖုန်းဆက်ပြီးဦးဟန်ညောင်ဝေမကောင်းကြောင်းပြောပြခြင်းဖြင့်ဖြုတ်ချခိုင်းတာကိုတရားမျှတမှုမရှိသည့်အပြင်တိုင်းရင်းသားများနေရာမပေးချင်သည့်သူရဲ.လျှိ.ဝှက်ဆန္ဒကိုဖော်ထုတ်ကြပါရန်တိုင်းရင်းသားအသံမှပန်းကြားလိုက်ရပါသည်၊ထွန်းအောင်ကျော်ဟာဗမာစကားကလွဲရင်ဘာဘာသာစကားမှပီအောင်မပြောနိုင်ပါ၊သို.သော်၊ဗမာစကားမပီသည့်တိုင်းရင်းသားတွေကိုသတင်းလုပ်ငန်းထဲမထည့်စေချင်တာဟာအတ္တဆန်းသည့်မဟာဝါဒီသမားတွေရဲ.အရင်းခံစိတ်ဓါတ်ဖြစ်ကြောင်းတိုင်းရင်းသားအသံမှမှတ်ယူသည်၊ဒါကြောင့်၊ဒီကိစ္စဟာအများအကျိုးအတွက်အကြောင်းပြီးမဟာဝါဒီသမားများ၏လုပ်ရိုလုပ်စဉ်အတိုင်းလူသတ်မရသည့်အဆုံးနာမည်သတ်ပွဲကြီးတစ်ခုဖြစ်သောကြောင့်လုံးဝတရားမျှတမှုမရှိနိုင်ပါ၊တန်တူအခွင့်အရေး၊တရားမျှတမှုရှိရေးကိုအလေးထားသည့်တိုင်းရင်းသားအသံကကိုထွန်းအောင်ကျော်ကိုရှုတ်ချပြီး Reaction ပြုလုပ်ရန်တိုက်တွန်းလိုက်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
The article of Tun Aung Kyaw (one of the founder of All Burma Students' Democratic Front=ABSDF, being currently residence of USA)named Alibaba and Forty Thieves had been studied by Ethnic nationalities' voice of Burma.Ethnic Voice' blog assumed that his article is based on chauvinism's view points. We, ethnic nationalities' voice of Burma regarded that there isapossible secret will of the article writer in behind. His article has finally focused U Han Yawnshwe to be taken action after he shots different directions. The article writer accused of U Han Yawnshwe for corruption without good reason. The Ethnic Voice of Burma assumed that the writer does not want U Han Yawnshwe to be appointed as an Acting Director of DVB because he is not an ethnic Burman.
Therefore, his campaign for removing U Han Yawnshwe from acting Director of DVB is insincere and injustice.Moreover, his secret will to prevent ethnic nationalities other than Burmans from getting management position in the DVB is to be revealed. We, ethnic voice of Burma urge all of the justice loved human beings to denounce the insincere action of Tun Aung Kyaw.
Tun Aung Kyaw does not influence in any language other than Burmese. But his article said the DVB appointed the people (ethnic nationaliteis other than Burman) who do not speak Burmese in fluently to work in media field. This point strongly frustrated the ethnic nationalities other than Burman for his assault. The article revealed his selfish and chauvinist narrow-minded acts.
Hence, he pretended of doing for people's benefit. In deed, he is doing with the chauvinist's narrow minded to kill the name of U Han Yawnshwe.
Finally, we, ethnic nationaliteis' voice of Burma, as stated in our slogans for equal right and justice again urge the justice loved human beings to denounce and react regarding the assault of Ko Tun Aung Kyaw over ethnic nationalities of Burma.
May all of the injustice acts fail.